काठमाडौंमा ५० रूपैयाँमा सादा खाना, ६० रूपैयाँमा मासु भात खान पाइने – Dainiki Sarokar
२०७७ फाल्गुन २८, शुक्रबार २०:५४
काठमाडौं। काठमाडौंमा एक छाक खाना खानुपर्‍यो भने कति पैसा खर्च हुन्छ? त्यसमा मासु भात नै खानुपर्‍यो भने त दुई दिनको सादा खानले एक छाकलाई पनि पुग्दैन । वसन्तपुर दरबार क्षेत्रबाट परोपकार भिमसेनस्थान नजिकै रहेको ‘खाना सबैलाई’ सामुदायिक भान्छाले यसरी खाना खुवाउँदै आएको छ। यहाँ खाना खानको लागि दैनिक तीन सय भन्दा बढी ग्राहकहरू आउँछन्। जो सस्तोमा गुणस्तरीय र स्वादिष्ट खाना खाएर जान्छन्। जोगेन्द्र शाह दुई महिनादेखि त्यही सामुदायिक भान्छामा नियमित खाना खान्छन् ।
सामान्यतया सादा खाना खानुपर्‍यो भने कम्तिमा एक सय रूपैयाँ गोजीमा हुनैपर्छ। यो तपाई हामीले खाएको, बुझेको र सुनेको कुरा हो । तर, अब ५० रूपैयाँ गोजीमा भयो भने पनि पेटभरी खाना खान पाइनेछ । त्यसमा १० रूपैयाँ थपेर ६० रूपैयाँ पुर्‍याउनुभयो भने त मासु भात नै खान पाइन्छ ।
त्यहाँको सरसफाई, खानाको गुणस्तर र स्वादिष्टताले उनलाई यो होटल कुनै विदेशीले चलाएको जस्तो लागेको थियो। उनले प्रश्न गरे, “ए बाबु! यो होटल कुन देशको नागरिकले सञ्चालन गरेको हो?” उनले यस्तो प्रश्न गरिरहँदा सामुदायिक भान्छाका सञ्चालक कृष्णहरि भट्टराई त्यहिनेर थिए। उनले आफूलाई देखाउँदै भने, “यो त हामीले नै सञ्चालन गरेका हौं ।”
यति कम रूपैयाँमा एकदम राम्रो खाना खुवाएको भन्दै जोगेन्द्रले सञ्चालकहरूलाई धन्यवाद दिए ।
उनीजस्तै सञ्जय चौधरी कालिमाटी क्षेत्रमा भारी बोक्ने काम गर्छन् । कोरोना महामारीका कारण अचेल उनको आम्दानी पनि निकै कम छ। आफूले कमाएको पैसाले होटलमा खाना खायो भने त घर खर्चको लागि बच्दैन। त्यसैले उनी पनि अचेल खाना सबैलाई सामुदायिक भान्छाका नियमित ग्राहक बनेका छन् ।
यो भान्छा पुस ९ गतेबाट सञ्चालनमा आएको थियो। कोरोना महामारीको समयमा निःशुल्क खाना तथा खाद्यान्न वितरण गर्दै आएका कृष्णहरि र नवराज मोक्तान मिलेर गैर–नाफामूलक सामुदायिक भान्छाको स्थापना गरेका थिए ।
उनीहरूले साधारण मानिस र न्यून आय भएकाहरूलाई भनेर छुट्टाछुट्टै मूल्यसूची बनाएका छन् । लक्षित वर्गका लागि ५० रूपैयाँमा सादा खाना (भात, दाल, तरकारी, अचार र सलाद) र ६० रूपैयाँमा मासुसहित खाना खुवाइन्छ ।
लक्षित वर्गभन्दा अरु अर्थात् पैसा तिरेर खान सक्नेलाई सादा खाना एक सय रूपैयाँ र मासुसहितको खाना सेटलाई ११० रुपैयाँ तोकेका छौं। कृष्णहरिले भने, “यसो गर्नुको उद्देश्य भनेको सामान्य मानिसबाट अलि बढीमा खाना खुवाउँदा आएको केही नाफा लक्षित वर्गको लागि होस् भन्ने हो ।”
“यहाँ हामीले व्यापार गर्ने भन्दा पनि न्यून आय भएका मानिसहरूलाई केही राहत होस् भन्ने नै हाम्रो प्रमुख उद्देश्य हो”, अर्का सञ्चालक नवराजले भने ।